Kismaayo News » Fahad Yaasiin iyo Fahamka sababta loo magacaabay
Fahad Yaasiin iyo Fahamka sababta loo magacaabay
Kn: Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa agaasimaha guud ee madaxtooyada u magacaabay Fahad Yaasiin oo ahaa shaqsigii udub dhexaadka u ahaa ololaha madaxweyne Farmaajo.
Sheekada Fahad Yaasiin waxa ay leedahay labo dhinac, waana hadba dhinaca uu qofka iska taago.
Dad badan Fahad waxa uu u yahay halyeey dhidibada u aasay xukun iyo hoggaan bulshada raali ka tahay, una qalma wax ka badan Agaasime madaxtooyo.
Waxa ay u arkaan nin diidey , kana hor yimid, lana dagaalamay xukunkii madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud oo lagu eedeeyo musuqmaasuq badan iyo dib u dhac.
Dadka yaqaana Fahad waxa ay sheegaan in uusan ahayn nin xil jecel, waxkastana ka hormariya danaha guud, iyaga oo tusaale usoo qaatay in xitaa ay jirtey in uu mar iska diidey xil wasiirnimo oo loo magacaabay xiligii Xassan Sheekh Maxamuud.
Waxa kale oo farta lagu fiiqayaa in uusan ahayn nin doonaya in uu meesha lacag ka tabcado, sida dadka kale qaar , sidaasi darteedna waxa uu hagaajinayo ay aad oga badan doonaan waxa uu haleyn doono.
Waxaa jira qorshe dawladda Qatar ay waddo oo ah in heshiis lala galo kooxaha dagaalamaha ee Alshabaab, Fahadna uu yahay qofka ugu habboon ee lagu aamini karo galkaasi marka laga hadlayo miisaankiisa siyaasadeed iyo waliba kalsoonida lagu qabo in uu si wanaagsan u maareyn karo qarashka ku baxaya mashruucani.
Waa nin qaadan kara go’aamo, naftiisana ku kalsoon, madaxweynahana uu aad ugu kalsoonyahay, wuxuuna xitaa suurtogalin karaa ayaa la leeyahay in lacago badan oo maalgashi iyo kaalmo kalaba kasoo xiro waddamada carbeed oo qaarkood ay markii hore shaki ka qabeen hoggaanka dalka.
Dad badan oo naqdiya nidaamkan cusub waxa ay sheegayaan in Fahad Yaasiin uu ka mid yahay waxa loo yaqaano “mulkiilayaasha” dawladda Farmaajo, islamarkaasina yahay dadka ugu awooda badan ee Farmaajo la shaqeeya.
Ugu yaraan mid ka mid ah dadka naqdiya Fahad oo ay KismaayoNews la hadashay ayaa sheegey in 3 arrimood oo aanan wanaagsanayn ay soo baxeen markii Fahad loo magacaabay xilka agaasimaha madaxtooyada.
Koow waxaa soo baxday han yaridiisa iyo xilka uu ku qancay, labo in uu hadda ka ag dhawaadey madaxweynaha, si joogtana shaqo u dhexmari doonto, taasina ay meesha ka saari doonto jacaylkii badnaa ee labada nin ka dhaxeeyay, iyo tan sedexaad oo ah in hadda Fahad uu tagay meel xasaasi oo dadka oo dhan ay hadda is wada arki doonaan, iskuna nici doonaan.
Fahad waa agaasimihii 3aad ee soo mara madaxtooyada muddo 3 bilood gudahood ah, halka 4tii sano ee Xasan Sheekh ay madaxtooyada soo mareen 3 agaasime, taasina waxaa loo arkaa gabi dhacleynta iyo siyaasada aanan wali fadhinin ee Farmaajo.
Dad kale iyagu waxa ay farta ku fiiqayaan in madaxtooyada ay hadda toos ola wareegeen kooxda Al Ictisaam oo ah urur diimeedka dhaxlay ururkii Al Itixaad, kuwaasoo uu geed fadhi u yahay Sheekh Bashiir Salaad oo ah guddoomiyaha dalada culumada Soomaaliyeed, sidaasi darteedna ay kooxaha Ahlu Sunna iyo ururada kale dareemi doonaan in meesha aysan boos ku lahayn.
Fahad waxa uu ka mid ahaa sida taariikhdiisa lagu sheegey raggii ka qeybgalay dagaaladii Luuq ee Al Itixaad ay la galeen Itoobiya, taasina waxa ay u sahashay in markii uu Al Jazeera la shaqo bilaabay uu xiriir wanaagsan la sameeyo kooxihii islaamiyiinta ahaa ee dalka ka jirey, aakhirkiina u suurtogalisey in dawladda Qatar uu xiriir wanaagsan la samaysto.
Shaqsi ahaan Fahad
Dadka yaqaana waxa ay sheegaan in uu yahay nin afgaaban, dhaqdhaqaaqiisu yaryahay oo qolka uu ka daganyahay Hotel Jazeera ee Xamar aanan ka bixin, islamarkaasina albaab dambe kasoo gala hoteelka.
Nin hal abuur leh oo garanaya ujeedada waxa uu qabanayo iyo halka uu u socdo, waana nin inta badan ka gabada saxaafada inkasta oo uu isagu saxafi yahay.
Xagga qorshe dajinta waa nin ku wanaagsan, waxaana la sheegey in siyaasadda Soomaaliya uu aad u fahamsanyahay, taasi oo u sahashay markii ololaha doorashada lagu jirey uu si wanaagsan wax u maareeyo.
Tusaale ahaan waxa uu xitaa kala garanayay siyaasiyiinta codka haya iyo kuwa aanan heynin, meelaha lacagta lagu bixinayo iyo kuwa qiyaanada u dagaya.
Si kastaba ha ahaatee guul iyo fashil waxa ku yimaada Farmaajo waxa uu noqon doonaa ninka dhabarka u rita si la mid ah ina adeerkiis Faarax Cabdiqaadir oo booskiisa oo kale ka joogay dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud.